हावा, पानी, खाना र निन्द्राविना कति दिन बाच्न सकिन्छ ? | परिसंवाद
परिंवाद डेस्क	 मङ्लबार, भदौ ३, २०७६ मा प्रकाशित
कोठा वातानुकुलित नहोस्, भित्री कोठाहरुमा फर्निसिङ नगरे पनि मान्छेको जीवनमा खासै फरक पार्दैन । तर, हामी खाना पाएनौं, पानी खान पाएनौं र पर्याप्त सुत्न पाएनौं भने धेरै दिनसम्म बाच्दैनौ । विज्ञहरु मानव जीवनमा “तीनको नियम” भनेर खाना, पानी र निन्द्रालाई लिने गर्छन ।
सामान्यतया खाना विना तीन हप्ता, पानी विना तीन दिन, खतरा र खराव मौसममा वास नपाउँदा तीन घंटा, स्वास विना तीन मिनेट । हाम्रो जीवन रेखा यसरी नै कोरिएको छ । तर, तातो र चिसो मौसमले पनि यो समयसिमामा घटबढ हुन सक्छ । गर्मी र तातोमा पानी विना धेरै समय बाच्न गाह्रो हुन्छ तर चिसो मौसममा तिर्खालाई केही बढी समय सहन सकिन्छ ।
खाना, पानी, निन्द्रा र हावा विना मान्छे कति बाँच्छ ? एकैछिन यसतर्फ ध्यान दिऔं ।
भोकमरीको अन्तिम चरण भनेको कुपोषणको महामारी हो । यो चरणमा पुग्दा मान्छेमा आवश्यक पर्ने क्यालोरी (भिटामिनहरु, कार्वोहाइटेड, प्रोटीन लगायत) सामाप्त हुन्छ । तर भोकमरीबाट मान्छेको मृत्यु हुन कति समय लाग्छ भन्ने कुरा, उसको उमेर, स्वस्थ्य अवस्था, शरीरमा भएको बोसोमा भर पर्छ । अर्थात, दुब्लो मान्छेभन्दा मोटो मान्छे अलिक धेरै समयसम्म जीवित रहन सक्छन् ।
चिकित्सकको परिक्षण र फेला परेका प्रमाणहरुले एउटा वयस्क मानिस ८ देखि १२ हप्ता बाँच्न सक्छ । तर संसारमा केही मानिस २५ हप्तासम्म बाँचेका तथ्य छन् । भोको मान्छेको मृत्यु खानेकुरा सँगसँगै प्यासका कारण पनि हुन्छ । भोकले अचेत भएपछि उसको शरीरले माङ्सपेशी, मुटुबाट समेत प्रोटिन लिन थाल्छ । यस्तोवेला धेरैजसोको मृत्युको कारण ह्दयघात हुनेगर्छ ।
पानी खान नपाउँदा
पानी जीवनका लागि अमुल्य छ । पानी विनाको जीवन असंभव छ । हाम्रो उमेर, लिंग, तौल हेरेर शरीरको ५० देखि ६५ प्रतिसत भाग पानीले ओगटेको छ । हामी खाएको पचाउन, आवश्यक अक्सिजन, पौष्टिक तत्वहरु शरीरको हरेक भागमा पुर्याउन पानीले काम गर्छ । पानीले शरीरको विकार र फोहोर तत्वलाई सफा गर्ने काम गर्छ । शरीरको यति अमुल्य पानी विनाको मृत्यु निकै दर्दनाक हुन्छ ।
पानी खान नपाएपछि र शरीरमा पानीको मात्रा कम हुन थालेपछि सबैभन्दा पहिला प्यासको पीडा शुरु हुन्छ । शरीरबाट पानीको मात्रा दुई प्रतिसत मात्रै घटेपछि प्यासले सताउन थाल्छ ।
प्यासले मृत्युको अन्तिम चरणमा चेत गुमाउनु अघि मृगौलाले काम गर्न छाड्छ । धेरै मानिसको पिशाब आउने क्रम बन्द हुन्छ । शरीरमा पानीको मात्रा घट्दै गएपछि छाला फुट्ने, सुक्ने र खस्रो हुनथाल्छ । घाटी सुकेपछि खसखस हुने हुँदा खोकी लाग्नथाल्छ । बान्ता हुन्छ । प्यासको अर्को पिडादायी परिणाम जिव्रो फुल्दै जानु हो । जिव्रो फुलेपछि त्यसको सोझै असर आँखा र मष्तिस्कमा पर्छ । टाउको अत्याधिक दुग्छ । अनि सबैकुरा भ्रम लाग्न थाल्छ र मानिस पूर्ण अचेत अवस्थामा पुग्छ । प्यासले अन्तिम अवस्था भने कलेजो, मृगौला र मुटुले काम गर्न छाड्छ । पानी विना मानिसको औसत जीवन तीन दिनको भएता पनि कोही कोही हप्तादिन भन्दा बढी बाँचेका घटनाहरु पनि छन् । त्यसको कारण उसको तौल, तापक्रम, स्वास्थ्य अवस्था इत्यादि हुनेगर्छ ।
नव विवाहितका लागि केही रात अनिन्दो बस्न गा¥हो हुँदैन । तर वैज्ञानिक अनसुसन्धानले अनिन्द्राका कारण हुने शाररिका समस्याहरु तत्काल र दीर्घकालीन भनेर छुटयाएको छ । शरीर विज्ञानका अनुसन्धनकर्ताहरु अनिन्द्राले स्मरणशक्तीमा पहिला हमला गर्छ, मानसिक विकास क्रममा समेत असर पार्छ । उ कामप्रति उत्प्रेरित हुन छाड्छ । शरीरको कोषिकाहरु पूर्ननिमार्णमा समस्या आउँछ ।
युद्धमा सिपाहीहरु तीन दिनसम्म नसुती बसेका धेरै घटनाहरु छन् । परिक्षणहरुले सामान्य मानिस ८ देखि १० दिन नसुती बस्न सक्छन् भन्ने देखाएका छन् ।
सन् १९६५ मा सत्र वर्षीय रेन्डी गार्डनर ११ दिन अर्थात २ सय ६४ घन्टा नसुतेर विश्व रेर्कड बनाउने व्यक्ति हुन । त्यसवेला, उनी आफ्नो कलेजको विज्ञान मेलाका लागि काम गर्दै थिए । एधारौं दिनमा उनी अनिद्राले केही गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका थिए ।
मानिसमा हुने मानसिक तथा शाररिक अस्थिरताका कारण कोही कोही महिनौ नसुतेका घटनाहरु पनि छन । जसलाई मोरभान्स् सिण्ड्रोम भनिन्छ ।
स्वास फेर्न नपाए
निस्सासिएर हुने मृत्यु पनि मानिस पिच्छे फरक हुन्छ । औसतमा धेरै मानिसको मुत्यु छिटो हुने प्रमुख कारण अक्सिजनको अभाव हो । तर हामीले फेर्ने स्वासमा कति किसिमका ग्याँस मिसिएको हुन्छ त्यसमा निर्भर गर्छ । अर्थात वायु प्रदुषणको अवस्थामा भर पर्छ । अक्सिजन मानिसका लागि नभई नहुने वायु हो । अक्सिजन नहुदाँ हाम्रो शरीरका लागि आवश्यक ग्लुकोजको प्रवाह घटेर जान थाल्छ । अक्सिजन शरीरमा नभएपछि मुटुको घड्कन पनि विस्तारै घट्न थाल्छ । अनि मुटु नै बन्द हुन्छ । तर, यो अवस्थामा मृृत्यु हुदाँ मृत्यु पश्चात पनि छ–सात मिनेट मस्तिष्क सक्रिय रहन्छ ।
सास फेर्न नपाउँदा, निसास्सिएर मानिसको सबैभन्दा छोटो समसमै मृत्युहुन्छ ।
नेकपा एकताको अर्को पाटो